Mon Petit Avatar: Temptation
If your love for pen rules your consciousness then please check out this MontBlanc website. These up-market pens are so lovely, elegant but not so affordable, at least, for me… and yet I still have this impulse to look at them everywhere possible. I can’t believe that the company started since 1908 and was later acquired by Dunhill in 1977. Since then, their marketing strategy has changed focusing on luxury goods other than pens. White six-pointed star with round edges representing snowcap of Mont Blanc is their trademark and sometimes it is specially made with diamond. We can engrave the pen and ask for simple technical assistance at the boutiques. But then we can always buy 20$ pen and get our pen engraved at Tokyu department store, right? You see, I can’t really writeapost by not puttingabunch of photos and actually, that’s where all my glee moment begins. A few days back, I took those pictures at Siam Paragon where MontBlanc exhibits to celebrate the 20th edition of MontBlanc “Patron of Art” collection. Aren’t they tempting?
Posted by Mon Petit Avatar at 8:07 PM
Labels: Obsession, Self, Shopping
ကျနော့်ဆီမှာလည်း Mont Blanc တစ်ချောင်းရှိတယ်၊ မှင်အိုး ၃ လုံးနဲ့...၊ လက်ဆောင်ရထားတာ၊ ဒါပေမယ့် အလုပ်မှာက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဘောပင်တွေပဲ သုံးဖြစ်နေတော့ အဲဒီ Mont Blanc ဖောင်တိန်က အခုထိ သူ့ဘူးထဲမှာ...၊း) နေ့စဉ်သုံး ဆိုရင်တော့ Caran d'Ache ကို ကြိုက်တယ်...။
Mont Blanc ဖောင်တိန်ဆိုတာ ကြားပဲကြားဖူးတာ မကိုင်ဖူးဘူး...။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဖောင်တိန်သုံးဖူးတယ် ..။ တော်တော်ငယ်သေးတယ် ငါးတန်းခြောက်တန်းလောက်တုန်းက...။ ဖောင်တိန်လေးညှစ်ညှစ်ပြီး မှင်ဖြည့်ရတာကို သဘောကျလို့...။ နောက်ပြီး ထိပ်ကလေးချွန်တာကိုကြိုက်လို့....။ ခုအလုပ်လုပ်တော့ မသုံးဖြစ်တော့ဘူး သူက မှင်စိမ့်တော့ ဘောပင်သုံးတာလောက်အဆင်မပြေဘူးထင်လို့...။ မွန့်ပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီးမှပဲ ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းလောက်ဝယ်သုံးချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ်....။ မောင့်ဘလက်တော့မဟုတ်ဘူးး)
တို့လဲ Mont Blanc လေးတစ်ချောင်း လက်ဆောင်ရဖူးတယ်
ငယ်တုန်းကတော့ တန်ဖိုးထား သိမ်းဆည်းရမှန်းမသိတော့ ပျောက်သွားခဲ့တယ်
ခုပိုစ့်ထဲက ပုံလေးတွေ့တော့မှာ ပြန်သတိရမိတော့တယ်
ပြန်လိုချင်လိုက်တာ တစ်ချောင်းလောက် လက်ဆောင်ပြန်ရရင် ကောင်းမှား)
Mont Blanc တစ်ခါမှ မ၀ယ်ဖူးပေါင်။ ရုံးကနေ လက်ဆောင်ရတာလေးတော့ ရှိဖူးတယ်။
ဦးခြိမ့်ရဲ့ ရန်ကုန်က သူထေးသူငယ်ချင်းတွေ စလုံးလာရင် Branded တွေဝယ်ကြတော့ ခဏခဏတော့ ကြားဖူးနေတာပဲ။
သူငယ်ချင်းတွေကမှရှိသေးတယ် ကိုယ်တိုင်တော့ Swarovski Crystal ကထုတ်တဲ့ ဘောပန် လေးတွေပဲရှိတယ် ကိုညီလင်းသစ်။
တို့တော့ ဖောင်တိန်တွေကို သုံးဖို့ကတော့စိတ်မရှည်တာနဲ့အလှသာကြည့်ချင်နေတာပဲ မိုးငွေ့ရေ။
တို့ကံများနဲလိုက်တာ ချောရယ် လက်ဆောင်ပေးမည့်သူမရှိ။ အင်း လက်ဆောင်ရရင်တောင် နှမျောတာနဲ့ သုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
အဲဒိနေ့က exhibition booth နားကမခွါချင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိရသွားတယ်ညီမလေးစန်းထွန်း။
ကံများနဲလိုက်တာလို့ ထပ်ပြောရဦးမယ် မမရေ။ လက်ဆောင်လဲမရဖူးဘူး သူများတွေဝယ်တာတော့နောက်ကနေ လိုက်ဖူးတယ်။
ကုိုယ်တော့ အဲဒါတွေကို စိတ်နဲ့ တောင်မပစ်မှားဘူး။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထုတ်သုံးရမဲ့ နေရာကို မရှိတာ။ တိန်။
ကုိုယ့်အတွက် ဂျပန်ဘောပင် ပွိုင့်သေးလေးတွေ ရောင်စုံဆုို အုိုကေပြီ။ ပြောမယ်ဆုိုရင် တန်ဘုိုးကြီးတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ ဘောပင်လို ဟာမျိုးတွေ လက်ဆောင်ရတာတောင် သိမ်းရင်းမှင်ခြောက်သွားတာဘဲ အဖတ်တင်တယ်။ ဘောပင်ကသစ်နေပေမဲ့လည်း မှင်ကခြောက်ပြီး ဘူးကတဖြေးဖြေးဟောင်းလာတော့ သူများပြန်ပေးရမှာတောင်မတင့်တယ်နဲ့ ။ ဘီရုိုထဲမှာလည်း သိမ်းရတာ များများလာပြီး နေရာယူလာတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း အဲလိုမျိူးလေးတွေရရင် အသုံးတဲ့မဲ့သူကို မြန်မြန်ပြန်ပေးဘို့ ဘဲစဉ်းစားမိတယ်။ သိပ်တန်ဘုိုးကြီးတာ မရဘူးလို့ လည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။...း))
မွန် ပြထားတဲ့ ဖေါင်တိန်တွေကတော့ လှတာတော့ ရှယ်ဘဲဆရာ။
Iora ပြောတာဟုတ်မယ် မင်ခြောက်သွားတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဆိုတာ။ တို့အတွက်တော့ မင်လုံးသေးရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်။ သိပ်ဈေးကြီးတာတွေကျတော့ သုံးရမှာမပြောနဲ့ စိတ်ကူးနဲ့တောင်မဝယ်ကြည့်ဖူးဘူး ဟီး။
Witty comic strips
Tea houses in Yangon - 2
Tea houses in Yangon - 1